तपाईलाई कतै जान हतार भयो ? मोबाइल ‘एप’मार्फत माग्न सकिन्छ बाइकमा लिफ्ट — Imandarmedia.com
तपाईलाई कतै जान हतार भयो ? मोबाइल ‘एप’मार्फत माग्न सकिन्छ बाइकमा लिफ्ट
के तपाई राजधानीको कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ ? सार्वजनिक सवारी साधनमा खाँदाखाँद भएर हिँड्न झन्झट मान्नुहुन्छ वा ट्याक्सी लिँदा महंगो पर्ने भएकाले खर्च गर्न असहज महसुस हुन्छ ? आफ्नो निजी सवारी साधन छैन भने तपाईलाई अब सजिलो उपाय उपलब्ध छ, ‘टुटल’ । अर्थात् अब विना हिचकिचाहट अरु कसैको मोटरसाइकलमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुनेछ । यसका लागि आवश्यक छ, मोबाइलमा इन्टरनेट ।
कुनै मोटरसाइकल धनी कहाँसम्म जाँदैछ त्यहीअनुसार आफूअनुकूल टुटलमा सम्पर्क राखेपछि र उसले तपाईलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिनेछ । यसअघि २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोल अभाव भएपछि यसरी नै मोटरसाइकलधनीले निशुल्क लिफ्ट दिएका थिए । यात्रुले मोटरसाइकल धनीलाई निश्चित रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन न ट्याक्सीजस्तो महंगो हुनेछ न त सार्वजनिक यातायातमा जस्तो खाँदिएर यात्रा गर्नुपर्नेछ ।
टुटल एप्समार्फत उपत्यकाभित्र सञ्चालन भइरहेको यो अवधारणाले यात्रु ठगिनबाट जोजिने शिक्षित भट्टको भनाइ छ । यसक्रममा कुनै समस्या आए ट्रयाकमार्फत् सबै सूचना टुटलमा प्राप्त हुन्छ ।
किलोमिटरअनुसार यात्रुले मोटरसाइकल धनीलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उनैले प्रस्तुत गरेको टुटल सन् २०१७ को सिडस्टार्स काठमाडौं घोषित भयो । उनलाई माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टर नेपालले ग्लोबल सिडस्टार्स समिटका लागि उनलाई टिकट र बस्नेखानेको व्यवस्था गरिदिएको छ । उनले आफ्नो टुटलको अवधारणा बताएर ७२ देशका अन्यलाई त्यहाँ पछि पार्न सके भने एक मिलियन डलर अर्थात् झन्डै १० लाख रुपैयाँसमेत जित्नेछन् । उनी ६१ यस्तै इनोभेसनलाई पछि पार्दै टप आठमा पर्न सफल भएका थिए ।
‘नेपाएक्सप्रेस’ दोस्रो भयो । ‘हनीगाइड’ तेस्रो । टप आठमा घरभेटी, कृषि घर, प्रोडक्ट विद स्टोरी, सजिलो र सोचवेयर छनोट भएका थिए । नेपाएक्सप्रेसले इ-कमर्स व्यापार गर्नेलाई तिनका ग्राहक वा उपभोक्तालाई सहज बनाइदिन्छ भने हनीगाइडले माउन्टेन चढ्ने टे«ेकरहरुका लागि कम रकम तिरेर यात्रा गर्ने, पर्याप्त सूचना प्रदान गर्ने र तत्तत् क्षेत्रका लागि बुकिङ गर्ने सुविधा दिएको छ।
काठमाडौंमा रहेका घर, डेरा, होस्टेल, अपार्टमेन्ट, फ्लाट आदि कहाँ खाली छन् र सहज रुपमा पाउन घरभेटीको अवधारणा ल्याइएको छ । कृषि घरले कृषकलाई सूचना र मौसमलगायत विज्ञको सुविधा दिनेछ भने प्रोडक्ट विद स्टोरीले खासगरि सीमान्तकृत आदिले उत्पादन गर्ने हस्तकलाका सामानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजान सहयोग गर्छ ।
सजिलोले डिजिटल मार्केटमार्फत् रेडियो, टेलिभिजन, घडी, मोबाइल आदि मर्मतका लागि उपत्यकाभित्र को कहाँ उपलब्ध छ त्यसलाई भेटाइदिने र सेवा प्रदान गराउने काम गर्दछ ।
२०७४ कात्तिक १३ गते प्रकाशित
चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मानवबारे अझै आशंका ! रुसले छानविन गर्दै
चीनको आकाशमा अब उसको ‘आफ्नै चन्द्रमा’, पिपुल्स डेलीले खोल्यो रहस्य
तयार भयो विश्वकै पहिलो उड्ने कार, कति छ यसको मूल्य, के कस्ता छन सुबिधाहरु
फेसबुकमाथि ह्याकरको हमला, ९ करोड प्रयोगकर्ता प्रभावित
नयाँ आइफोन सार्वजनिक, के-के छन् फिचर
७० वर्षीय वृद्ध, जो ११ वटा स्मार्टफोन बोकेर पोकेमन खोज्दै हिँड्छन्